Tirakoobka Suuq-geynta Video-ga ah inaadan ogaan karin! | Martech Zone
Tirakoobka Suuq-geynta Video-ga ah inaadan ogaan karin!
Tuesday, May 16, 2017 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Hadday tahay fiidiyowyo bulsheed, sheekooyin maalinle ah, fiidiyowyo waqtiga-dhabta ah, ama istiraatiijiyad kale oo fiidiyoow ah, waxaan ku noolnahay adduun halkaas oo waxyaabo badan oo fiidiyoow ah la soo saaro lana cuno in ka badan abid taariikhda. Dabcan, taasi waa labadaba fursad weyn iyo tartan aad u weyn maxaa yeelay waxyaabo badan oo fiidiyoow ah ayaa la soo saarayaa waligoodna runtii lama arkin. Faahfaahintan ka socota Website -ka Builder.org.uk muujinayaa tirakoobyadii ugu dambeeyay ee suuqgeynta fiidiyowga.
10 Xaqiiqo oo ku saabsan Suuqgeynta Fiidiyowga
78.4% dadka isticmaala Mareykanka waxay daawadaan fiidiyowyada internetka
Ragga ayaa 44% ka badan dumarka ku qaata Youtube-ka
Da'da 25-34 ee Maraykanka ayaa leh fiidiyaha fiidiyowga ugu sarreeya 90%
Kalabar dhammaan amerikanka (164.5 milyan) waxay daawadeen TV dijitaal ah sanadkii 2016
72% ganacsatada bulshada waxay doonayaan inay bartaan suuqgeynta fiidiyowga
Fiidiyowga warbaahinta bulshada wuxuu kordhiyaa wadaagista toban laab
Sida laga soo xigtay Facebook, illaa 2018, 90% waxyaabaha ay ka kooban yihiin waxay ku saleysnaan doonaan fiidiyoow
96% dhammaan suuqleyda waxay maalgashadeen suuqgeynta fiidiyowga ee 2016
70% wakaaladaha xayeysiinta ayaa aaminsan in xayeysiinta fiidiyowga ay kafiican yihiin ama ka waxtar badan yihiin TV-ga
Dakhliga guud ee ROI ee fiidyowga laxiriira TV-ga wuxuu 1.27 jeer ka sareeyaa marka TV-ga loo isticmaalo
Ma jirto wax iska soo horjeed ah oo aan ka shaqeyneynin beddelkeena Istuudiyaha 'Indianapolis Podcast' galay istuudiyaha fiidiyowga oo buuxa oo leh awood-waqtiga dhabta ah. Waxaan sii wadeynaa inaan ku aragno natiijooyin wanaagsan fiidiyow - waa inaan si dhakhso leh ugu dhaqaaqnaa si aan uga faa'iidaysano. Caqabada ayaa ah in barnaamijka softiweeriga ah iyo qalabka loo baahan yahay ay qiimo dhacayaan iyadoo la isku darayo awooda baahinta baahinta ee shabakada. Haddii aan goor hore quusinno, wax badan baa naga bixi doona. Laakiin haddii aan goor dambe soo quusno, waxaan seegi doonnaa xawaaraha!
Sida had iyo jeer ah, waan kula wadaagi doonaa jihada aan u jihayno!
Tags: xaqiiqooyinkaFiidiyowyada Suuqgeyntasuuqgeynta fiidiyowgaxaqiiqooyinka suuqgeynta fiidiyowgatirakoobka suuqgeynta fiidiyowgastats suuq geynta fiidiyowgaDhismaha WebsitekaWebsite -ka Builder.org.uk
5 Tilmaamood oo ku saabsan Qorista Mawduucyada Suuqgeynta ah ee Keena Qiimaha Ganacsiga
Vectr: Beddelka Bilaashka ah ee Adobe Illustrator